Digital Patrika – अब मेरो जितलाई कसैले रोक्न सक्दैन
| Wednesday, 24 April 2019
अब मेरो जितलाई कसैले रोक्न सक्दैन
Nov 17, 2017digitalpatrikaअन्तर्वार्ता0
मुस्ताङमा विकासप्रेमी नेताको छवि बनाएर सबैको मन जित्न सफल भएका पूर्व वाणिज्य मन्त्री, निवर्तमान प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसद रोमी गौचन थकाली अहिले प्रतिनिधि सभाको उम्मेदवार हुनुहुन्छ । प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभाको चुनावी गतिविधि बढेदै गएको बेला मुस्ताङका बिकास प्रेमी नेताका रुपमा आफ्नो छुट्टै छवि बनाएका गौचन नेपाल कांग्रेसका तर्फबाट प्रतिनिधि सभा सदस्यका उम्मेदवार हुनु भएको हो । मुस्ताङको चुनावी गतिविधी केन्द्रीत रहेर पछिल्लो समय हामीले गरेको सम्बाद अबको क्रममा ।
चुनाव कतिको लागेको छ ?
चुनाव लागेकै छ । पार्टीका उम्मेदवार र कार्यकर्ताहरु भोट माग्न घर दैलो कार्यक्रममा व्यस्त छन् र म पनि जनताको माझ गएर भोट मागिरहेको छु, मैले पदमा रहदा वा नरहदा गरेका कार्यहरु , आगामी दिनमा गर्ने कामको मूल्याकन गरेर जनताले भोट हाल्नु हुनेछ भन्ने विश्वास लिएको छु ।
कस्तो छ तपाईको पक्षमा माहोल ?
चुनावको प्रक्रिया शुरु भएदेखि नै मेरो माहोल निक्कै राम्रो छ । रोमी दाई, रोमी भाई, रोमी मामा, रोमी काका र सबै जनताले मलाई अदर र सम्मानपूर्वक मतदान गर्ने बताएका छन् । मैले मुस्ताङको विकास र समृद्धिका लागि गरेको कामबाट सबै जनता खुसी छन् र यही नै मेरो जितको आधार हो र जित सुश्चित भएको देख्दैछु ।
तपाईको प्रतिस्पर्धी त तपाईलाई निक्कै धेरै आलोचना गरिरहेका छन् के भन्नुहुन्छ ?
मेरो प्रतिस्पर्धीसँग मेरो कुनै बैमुनश्यता छैन । म त चाहन्छु हामी दुवै जना एउटै खर्चमा चुनाव लडौं आउनुहोस् जनता सामु मैले गरेका र उहाँले गरेको काम र गर्ने कामको बारेमा भनौं भनिरहेको छु तर उहाँ मुस्ताङगीहरुको संस्कृति वाहिर गएर आलोचनामा मात्रै समय खर्च गरिरहनु भएको देख्छु र सुन्दैछु । यसको कुनै अर्थ छैन । स्वस्थ्य प्रतिस्पर्धा मैले चाहेको हुँ र यही नै मुस्ताङ संस्कृति हो । यहाँ बस्ने थकाली, गुरुङ, दलित, क्षेत्री वाहुनदेखि सबै जातजातिले सभ्य संस्कृतिलाई मात्रै मान्दछन् र सभ्य संस्कृति मुस्ताङगीहरुको पहिचान हो । कसैले मामा, कसैले काका, कसैले दाई, भाई भन्ने गरि पो चुनाव प्रचार गर्नुपर्छ । मैले नेपाली काँग्रेसका नेता कार्यकर्तालाई धैर्य र संयम भएर चुनाव प्रचार गर्न भनेको छु । हाम्रो धैर्यता र संयमतालाई कसैले कमजोरी नठानोस भनेर तपाईकै मिडिया मार्फत भन्न चाहन्छु ।
यस भन्दा अगाडि पनि मुस्ताङबाट निर्वाचित हुनु भयो मन्त्री बन्नु भयो यो अवधिमा चाहि रोमी गौचन थकालीले के कस्ता कामहरु जिल्लाका गर्नुभयो आम मानिसले जान्न चाहेका छन् नि ?
म त पदमा रहँदा वा नरहँदा जहिले पनि मुस्ताङकै विकासमा समर्पित छु । जव २०५६ सालमा म निर्वाचित भएर काठमाडौं गए तब मैले मुस्ताङमा बाटो लैजानु पर्छ भनेर लविङ थाले । त्यतिबेला मैले प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री, योजना आयोगका उपाध्यक्ष लगायतसँग मुस्ताङमा बाटो लैजानु पर्छ भन्दा धेरैले मानेका थिएनन् । मुस्ताङमा बाटो जाँदा त्यहाँको प्राकृतिक सौन्दर्य विग्रनेदेखि अनेकौं कारण देखाइयो तर मैले मानिन र भने जनताले बाटो चाहेका छन् प्रधानमन्त्री ज्यू बाटो लैजानै पर्छ । यसो भन्दा मलाई उहाँहरुले हल्लाखोर भन्नु भयो । त्यतिबेलाका अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतले मलाई रोपवे लैजानु भन्नु भएको थियो तर मेरो एक सूत्रिय माग थियो मोटरबाटो नै थियो । कराउँदै, चिच्याउँदै मैले यही हल्लाखोरेले बाटो लगेको हो भन्दा आज मलाई निक्कै गर्व लाग्छ । मुस्ताङको उत्पादन, जलस्रोत र आर्थिक बृद्धिका लागि बाटो नै लैजानुपर्छ भनेर मैले लागेकै कारण आज मुस्ताङ मुस्ताङ भएको हो । यसले मलाई निक्कै खुसी र आनन्द दिन्छ । म सम्झन्छु बाटो खन्दा निक्कै ठूलो अवरोध भयो, मलाई धेरै धम्की आयो । मेरो खच्चर अपहरण पनि भयो । म परराष्ट्र सहायकमन्त्री भएकै बेला सेनालाई जिम्मा दिएर खनिएको मेरो कार्यकालमा म्याग्दीबाट मुस्ताङ जोड्ने सडक कालोपत्रे भएको छ । जोमसोम केरल्ला दुई लेनको ग्रावेल पनि हँुदैछ । मुक्तिनाथ दर्शन गर्न आउने राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय तीर्थालुहरुका लागि सहज बनाउन कागबेनीदेखि मुक्तिनाथसम्मको सडकलाई पनि कालोपत्रे गरिएको छ । मनाङबाट मुस्ताङ र डोल्पासम्म पनि पुग्ने बैकल्पिक मार्गहरुको पनि अध्ययन गरिएको छ । विभिन्न ग्रामिण भेगमा कच्ची सडक निर्माण, पुल निर्माणका कामहरु पनि संचालन भईरहेका छन् ।
त्यति मात्रै होइन उपल्लो मुस्ताङमा शिक्षाका लागि छोडेङमा आवासीय माध्यमिक विद्यालय सरकारी अनुदामै खुलेको छ र यस्ले त्यहाँको शिक्षालाई अगाडि बढाएको छ र यो मैले नै गरेको पहलबाट सभ्भव भएको हो । स्वास्थ्य, शिक्षा, सडक, नाका कोरल्ला नाका खोल्ने प्रयास लगायत गरेको छु । विद्युतीकरण गरेर उपल्लो मुस्ताङका दाजुभाई दिदीवहिनीलाई स्वस्थ्य मात्रै होइन उत्पादनवृद्धि गर्ने, सन्चार नेटवर्क बनाउन गरेको प्रयासलाई सबैले सह्राना गरेका छन् । मैले गरेका अनेकौं कामहरु छन् जस्लाई सम्झेर जनताले भोट दिनुहुनेछ । अझै धेरै गर्न बाँकी छ र समृद्ध मुस्ताङ बनाउने मेरो योजनालाई यहाँका जनताले सहयोग गर्नु हुनेछ ।
मुस्ताङमा ऐतिहासिक, धार्मिक र भौगोलिक रुपमा धेरै पर्यटकिय संभावना बोकेको क्षेत्र हो ? यस क्षेत्रको दिगो विकासका लागि के गर्ने योजना बनाउनु भएको छ ?
मैले मुस्ताङमा ऐतिहासिक, धार्मिक र भौगोलिक रुपमा धेरै पर्यटकिय संभावना देखेको छु । मुस्ताङलाई धार्मिक र सांस्कृतिक रुपमा विकास गर्न पोखराबाट कोरल्ला हँुदै तिब्बतको मानसरोवरसम्मको तीर्थयात्रालाई सहज ढंगले संचालन गर्नका लागि सम्वन्धित पक्षहरु संगको संवाद गरिरहेको छु । बार्षिक दश लाख तीर्थयात्रीलाई जोमसोम, मुक्तिनाथ, तिलिचो, दामोदर कुण्ड हुँदै मानसरोवर पु¥याउने योजना छ । यसले यस क्षेत्रका पर्यटन व्यवसायी र जनताको आयस्रोतको बृद्धि गरि सामाजिक आर्थिक बिकास गर्न सकिन्छ भन्ने मेरो दृढ संकल्प छ । कोरल्ला नाकालाई संचालनमा ल्याएर यस क्षेत्रलाई व्यापारिक ट्रान्जिटका रुपमा पनि बिकास गर्ने योजना रहेको छ ।
मुस्ताङको समग्र विकासका लागि कस्ता कस्ता संभावनाहरु देख्नु भएको छ ?
विगत तीस बर्षदेखि जनताको न्याय, मानव अधिकार, सामाजिक आर्थिक विकाससँगै मुलुकको समग्र समृद्धिको मार्गलाई पूरा गर्न म अगाडि बढिरहेको छु । मुस्ताङमा ऐतिहासिक, धार्मिक र भौगोलिक रुपमा बिबिधता भएको यस सुन्दर जिल्लालाई यसको अस्तित्वको दिगो रुपमा संरक्षण र सम्र्वद्धन गर्दै विकासका कार्यक्रमहरुलाई योवनावद्ध रुपमा लैजाने सोचमा छु । यहाँको कृषि, पर्यटन, व्यापारिक मार्गका रुपमा विकास गर्न यहाँ धेरै संभावनाहरु छन् त्यसका लागि सडक यातायात विस्तारका साथै जनतालाई छिटो सेवा प्रदान गर्नका लागि आफू लागि परिरहेको छु ।
बार्षिक दश लाख तीर्थयात्री र पर्यटक ल्याउनका लागि के के गर्नु हुन्छ ?
धौलागिरि बेसक्याप्प, अन्नपूर्ण पदमार्गलाई अझै व्यवस्थित रुपमा संचालनका लागि विभिन्न स्थानमा चेक पोष्ट, सहायता कक्षहरु स्थापनाका साथै स्थानियहरुलाई पनि सक्रिय रुपमा सहभागी गराएर पर्यटकहरुलाई आकर्षित क्षेत्र बनाउँछौ । पर्यटकको चेक पोष्ट, बस्नका लागि सुविधाजनक होटल, गोदाम, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको अध्यागमन, भन्सार सुविधा जस्ता योजनाहरुलाई प्रमुख प्राथमिकतामा राखेका छौं ।
मुस्ताङले कृषि क्षेत्रबाट उत्पादित बस्तुले सही बजार नपाएको गुनासो छ नि ?
भौगोलिक रुपमा सडक सञ्जालले ढिलो जोडिदा यहाँका उत्पादित बस्तुहरुले सहि मूल्य नगाएका हुन् । अहिले केन्द्रमा लडेर सडक सञ्जाललाई स्तरीय गरेको छु । मुस्ताङलाई जैविक अन्नको भण्डारको रुपमा बिकास गर्नका लागि यहाँको स्याउ, मह, जडिबुटिहरु प्रशोधन गर्ने र निर्यातका लागि सुरु गरिसकेको र यसलाई अझै विस्तारित गर्ने यहाँका विभिन्न व्यवसायीहरुसँग छलफल पनि अगाडि बढाएको छु ।
अन्त्यमा मुस्ताङको समग्र विकासका लागि अरु पनि केही योजना छन ?
समाजको सामाजिक आर्थिक विकाससँगै मुलुकको समग्र समृद्धिको मार्गलाई पूरा गर्न मुस्ताङमा गुणस्तरीय स्वाथ्य, शिक्षाका लागि पनि मेलै धेरै पहल गरेको छु । मुस्ताङलाई दुर्गम भनिए ता पनि यो समय विज्ञान र सूचना प्रविधिको युग रहेको हुँदा अब प्रभावकारी प्रविधिको विकासका लागि पनि विभिन्न योजनाहरु रहेका छन् । गोवरका गुइठा बालेर इन्धनको आपूर्ति पूरा गर्ने मुस्ताङवासीहरुलाई विद्युतीकरण गर्दै जीवनस्तर उकास्ने मेरो परिकल्पना छ । प्रतिव्यक्ति आए देशकै सबैभन्दा बढी बनाएर समृद्ध मुस्ताङ बनाउँन मैले आफ्नो ३० बर्ष खर्च गरिसकेको छु भने बाँकी जीवन पनि मुस्ताङकै समृद्धि र विकासका लागि खर्चने मेरो प्रतिवद्धता छ ।